अनौठो चलनः जहाँ विवाहित महिलाले ५ दिनसम्म लगाउँदैनन् कपडा
एजेन्सी । तपाइँले विवाहका अनौठा परम्पराहरु सुन्नुभएकै होला । तर यो परम्परा अझै अनौठो छ । छिमेकी देश भारतमा एउटा यस्तो गाउँ छ जहाँ विवाहित महिलाहरुले ५ दिनसम्म कपडा नै लगाउँदैनन् । ती पाँच दिन महिलाहरु निर्वस्त्र रहन्छन् । भारतको हिमाञ्चलस्थित पिणी गाउँमा वर्षौँदेखि यो संस्कार चलिरहेको छ । मणिकर्ण उपत्यकास्थित यो गाउँमा विवाहित महिलाहरुले ५ दिनसम्म अन्य कपडा जिउमा लगाउँदैनन् र केवल ऊनबाट बनेको पछ्यौराले जिउ छोपेर बस्दछन् । यी...
एजेन्सी । एक्काइसौं शताब्दीको अहिलेको युगमा गुफा छिरेर रोग निको हुन्छन् भनेर भन्यो भनी मूर्ख ठान्लान् सबैले । अस्पतालमा गएर डाक्टरसँग उपचार गराउनु नै उपचारको एकमात्र विकल्प हो भन्ने ठानिन्छ अहिले । तर कहिलेकाहीँ अस्पताल गएर जति उपचार गराउँदा पनि रोग निको नभएपछि मानिसले चित्त बुझाउनका लागि अनेक उपाय गर्दछ । सायद यो गुफाभित्र छिर्नु पनि एउटा यस्तै उपाय हो । अष्ट्रियामा एउटा यस्तो गुफा फेला परेको छ जुन गुफा भित्र...
जब नर्सलाई प्रपोज गर्न घाइतेले लगाए यस्तो जुक्ति
एजेन्सी । आफूलाई मन परेको केटा वा केटीलाई प्रपोज गर्ने तरिका अनेक हुन सक्दछन् । तर, रुसका एक युवकले प्रपोज गर्नका लागि जुन तरिका अपनाएका छन् त्यसले धेरैको होस हवास उडाउन सक्छ । आखिर कोही मानिस कसैलाई प्रस्ताव राख्नका लागि यो हदसम्म कसरी जानसक्छ ? यो प्रश्न उठ्नु अस्वभाविक होइन । वास्तवमा ती युवक केही दिनअघि दुर्घटनामा परी घाइते भएका थिए । जसका कारण उनको पेटमा गम्भीर चोट लागेको थियो ।...
जहाँ लोग्ने र सासु ससुराले नै बेच्छन् आफ्नी पत्नी-बुहारी !
एजेन्सी । हाम्रो छिमेकी देश भारतको राजधानी नयाँदिल्ली नजिकैका केही इलाकाहरुमा यस्तो समुदाय बस्दछ जहाँ घरकै मानिसहरुले श्रीमती तथा बुहारीहरुलाई बेच्दछन् । घरका लोग्ने तथा सासु ससुराहरुले नै आफ्नी पत्नी तथा बुहारीलाई बेश्वावृत्ति गर्न बाध्य पार्दछन् । रिपोर्ट अनुसार दिल्लीसँग जोडिएको धरमपुरा लगायतका इलाकामा बस्ने परना नामक समुदायमा यो घृणित परम्परा चल्दै आएको छ, सदियौंदेखि । रिसर्च साइट प्यासिफिक डट कमले उक्त समुदायमाथि गरेको अध्ययन अनुसार त्यहाँ पतिले नै आफ्नी...
उधारो चुकाउन नसकेपछि ऋणीको पत्नीसँग साहुले विताए रात !
एजेन्सी । कोरोनाका कारण दैनिक काम गरिखानको जीन्दगीमा यति ठूलो असर परेको छ कि जसलाई शब्दमा बयान गर्न मुस्किलै पर्छ । तर, भारतमा एक अनौठो घटना भएको छ । जहाँ डेरामा बस्दै आएका एक मजुदुरलाई ब्याजमा १० हजार रुपैयाँ लिनु आफ्नी पत्नीलाई ब्याजका रुपमा दिएर चुकाउनु परेको छ । यो घटना भारतको अररिया जिल्ला अन्तर्गत जोगवनी अमाना पञ्चायतको हो । खबर अनुसार मुम्बईको महारष्ट्रमा एक जना मजदुरी गर्दै आएका थिए ।...